Kubalulekile kakhulu futhi isici esiqine ezithinta inqubo zomlando bebonke, futhi umphakathi ikakhulukazi - okungukuthi ukuhweba. Izinga ukuthuthukiswa ukuhweba - lokhu ingenye nenqubo ye-jikelele ezingeni yamasiko kokuhlaziywa abantu, futhi ephakeme kangakanani, ayanda ezingeni ubudlelwane ukuhweba phakathi kwazo. Lokhu kuqinisekisa noma cha ukudayisa nhlobo, noma ukuba kwabo esiteji zokwenana nalo bakudala "stowage" e ekhona, izizwe ngonya. Uyini ukuhweba manje? Le nethiwekhi kuyinkimbinkimbi ukumboza umhlaba wonke of ubudlelwano ukuthengisa kube nomthelela kubalulekile ukuphila zezenhlalo nezombangazwe emazweni nabantu.
Ifomu sangaphandle ukuhweba
Ukuhweba ukuthengiselana lapho umthengi kanye nomdayisi kukhona emazweni ahlukahlukene, okusho lapho izimpahla ngenxa ukuthenga nokuthengisa ihamba yeqe imingcele, okukhulunywe namanye amazwe. Lolu hlobo lwe-trade ine uhlobo yokungenisa, ukuthekelisa futhi yezokuthutha. Trade ukuthengiselana phakathi kwalawa mazwe amabili (lapho kungenzeka khona izimpahla kuphela ukweqa imingcele phakathi kwalawa mazwe amabili) ibizwa ngokuthi kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle. Izimpahla amazwe okukhulunywe amazwe futhi izwe umdayisi - ongenisa ngaye, nempahla yakhe ithengiswe - athunyelwa kwamanye amazwe. Lapho ukuhweba esiphazamisayo yangaphandle is neither umthengi noma umdayisi, khona-ke ibizwa ngokuthi ukuhamba, ukuthuthwa kwezimpahla ezweni - Transit.
Ifomu sangaphakathi ukuhweba
Kuyini nokuhweba, wathi yencazelo. Kuleli fomu izimpahla ukwenza imingcele hhayi esiphambanweni. Umdayisi ithumela izimpahla ezandleni umthengi, okusho zingabantu endaweni efanayo noma idolobha (lena ukuhweba sendawo). Umthengi kanye nomdayisi kungenzeka emadolobheni ahlukene, bese izimpahla abazenzi kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye - umsebenzi wezandla elide.
ukuhweba lwezeMpilo Usizo, kanye emakethe - ubheka emakethe yasekhaya. Inkampani ukuhweba isixhumanisi eyinhloko, umsebenzi oyinhloko okuyinto ukuthengisa. Lapho sithengisa kukhona ukushintshwa uhlobo inani lezimpahla ku imali.
Sales ikhomba izinhlobo ezimbili ukuhweba: lwezeMpilo Usizo. Uma ngenxa ukuthengiswa kwezimpahla ezandleni umthengi ngenxa yokusebenzisa kwakhe siqu okungezona zokuhweba, lo msebenzi samaqanda - ukuhweba iimfesi. Kungenzeka ngokudayisa mathupha esitolo, emgwaqeni, ekhaya lomthengi noma ngocingo, ngeposi, ngokusebenzisa umshini Vending. izinkampani Modern ukuthengisa izinto okudayisa, are of nhlobonhlobo eziningi. Lokhu izitolo self-service ukuthengisa izinto nsuku zonke ngamanani ezingabizi. Kukhona izitolo nokukhetha khulula izimpahla, kodwa deal sokugcina senziwa nomthengisi. Amanani kulezi ezitolo ephakeme ngoba acabangele phezulu ukhokhelwa abasebenzi. Amabhizinisi kanye isevisi enomkhawulo kumakhasimende ukunikeza usizo lochwepheshe ziphinde zinikeze amanye amasevisi. Ngokwesibonelo, ukuthengwa kwezimpahla ngesikweleti futhi ikhono ukubuyela umkhiqizo omusha, okuyinto ngasizathu simbe akaphenduli umthengi.
abathengi acebile ukungena ezitolo imfashini esigcwele inkonzo amakhasimende. Kulezi izitolo izimpahla ezibizayo. Ngaphezu anhlobonhlobo amasevisi abolekise, izinkampani ezifana ukunikeza amakhasimende ne yabagibeli, amathilomu, izindawo zokudla, abahlinzeka ngemisebenzi, ukulethwa khulula kanye nokugcinwa kwezimpahla ekhaya kanye nezinye Izinsiza.
Amanani kanye nezinhlobo okudayisa
izitolo zokuthengisa kuhluke ezingeni amanani. Ukuthengisa imfashini ngamanani aphezulu. Iningi sipho izimpahla naphakathi lebanga lentengo.
Futhi yilokho ukuhweba kanye nezinkampani ngamanani encishisiwe? Leli akulona bhala phansi, enganciphisa ukudayiswa noma ukuhweba kwezimpahla eliphansi. Lezi zinkampani ezisebenza isimiso inzuzo okusezingeni eliphezulu. Ukuthengisa ngamanani aphansi futhi omningi abathintekayo esitolo-ishede. Izitolo ezifana ezidayiswa, izinhlu ezohwebo kanye amanani uhlu. Kukhona izinhlobo eziningi ukuhweba nonstore okudayisa ngokusebenzisa mail order, ngocingo, imishini Vending, in the sigqoka.
uhla kwezohwebo kwezimpahla
Izinkampani ngidayisa phezu ezihlongozwayo ububanzi kwezimpahla okukhulunywe nezitolo ezinkulu noma izitolo kanye okukhethekile ezitolo. Kukhona izinkampani eziningi ukuhlinzeka izinhlobo ezahlukene izinsiza okudayisa. It is eziqala amasevisi amabhange, amahhotela, izindiza ziphethe ubuhle kanye nokuphila izakhiwo. Esikhathini imikhiqizo umnyango esitolo of okunezinhlobonhlobo ezahlukene ethulwa ezigabeni ezikhethekile.
Supermarket - inkampani ukuhweba ukuthi usebenza self-service, lapho izimpahla bezinhlanga ezahlukene kungaba imelelwa ahlobene. Ngo okukhethekile ilondoloza izimpahla yohlobo olufanayo amaqembu umkhiqizo, kodwa saturation jikelele. It ezitolo, ifenisha, ekhaya Imishini, ezemidlalo isembatho, imibala, njll Bangakwazi kakhulu ezikhethekile ibhizinisi. Emkhakheni izingubo, isibonelo, kuyinto esitolo lingerie. Ezitolo zokudla kanye namabhizinisi ezikhethekile ubunjalo kungenzeka uhwebo lwezitolo kanye nezitolo.
Uma ngenxa ukudayiswa umthengi ozuza izimpahla Akuthengiseki kabusha noma ukusetshenziswa emsebenzini wabo, kuba umbuzo uhwebo lwezitolo. Ukuthenga endaweni kanye umthamo izinkampani wholesale ukuthengisa okuningi kuka okudayisa. Wholesalers kahle enze izinto ezinhlelweni zokuthenga imisebenzi, izinto zokuthutha, Warehousing, breaking phansi eceleni, ukwelulekwa nezinsizakalo zolwazi emakethe, kumiswa oda, yokuthengisa, ezezimali nokuphatha.
Kunamaqembu eziningana Wholesalers. Eyokuqala - a amafemu ezentengiselwano, zezohwebo, lezisekelo, abasabalalisi labatfola ilungelo ubunikazi umkhiqizo wabo kanye nomsebenzi nge umjikelezo ogcwele noma elinganiselwe service. Iqembu lesibili siqukethe ejenti, ama-ejenti. Umsebenzi oyinhloko we-ejenti - ukugqugquzela uhwebo, wabathengi - ukunciphisa umdayisi nge umthengi okungase kube khona noma okuphambene nalokho, kuye ngokuthi ungubani kwakuqashwa. Ngenxa yalezi namasevisi iholo. Iqembu lesithathu - igatsha abakhiqizi wholesale, ukuvumela abathengi kanye nabathengisi ukudayisa amadili ngaphandle labalamuli, ngaphandle ukubandakanywa Wholesalers ezimele.
Imakethe siyinhlangano ibhizinisi futhi kungakhathaliseki ubunikazi abahlanganyeli kungaphansi kwemithetho kanye kulawulwa yimithetho ukuhweba isimo. Ekuhwebeni ezimakethe ubelokhu esadlala indima ebalulekile ekunikezeni ukudla kanye ezidayiswayo, njengoba umkhiqizi oqondile likwazi ukufinyelela ukhululekile izimpahla zalo emakethe. indlela esebenza lezimpahla-imali exchange kulawulwa kwaneliswe isidingo emakethe ngqo. ukuhweba Ivunyelwe lwezeMpilo Usizo. Kwimakethe, izimo ezidingekile ukuhweba. Esakhiwe izitolo. Basuke ifakwe imishini futhi lobuchwepheshe. Market - kuyindlela elula futhi emfushane anoma yiluphi uhlobo nenani izimpahla ngesikhathi intengo imali kusukela umkhiqizi kumthengi.
Vologda eziyinxanxathela. incazelo
SEC "Wik" Kazan: ikheli, umsebenzi kanye nokubuyekeza
Nakwentiwa sabantu kube inkomba yokuthi ezingeni ukuchuma
I-Lake Peito iyinzuzo yaseCanada